Pejy an-tsary : Fanolorana ny Fonja manara-penitra sy misy fiarovana manokana eto Imerintsiatosika
Fanajana ny zon’olombelona :
Vita ny Fonja manara-penitra ao Imerintsiatosika
Porofo hita maso sy azo tsapain-tanana. Tontosa androany Zoma 17 Septambra 2021 ny fanolorana ny Fonja manara-penitra sy misy fiarovana manokana ao Imerintsiatosika. Tafiditra anaty Velirano III nataon’Andriamatoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara ny fanajana ny zo maha-olona.
Efitra 16 mahazaka voafonja 30 ka hatramin’ny 50 no hita ao amin’ity fotodrafitrasa vaovao ity. 480 no isan’ireo voafonja afaka afindra ao, fa mahazaka hatramin’ny 800 ny toerana raha ny habeny. Ahitana ny fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena avokoa : ny tokotany lehibe, ny fatoriana, ny toeram-pidiovana sy fivoahana, ny fandraisana ireo marary sy fitsaboana, ny toerana fisakafoanana iombonana, ny fanasan-damba, ny toerana hahafahan’ny voafonja sy ny mpamangy miresaka (parloirs), ny toerana fampiofanana, ireo karazana fitaovana toy ny fiarovana amin’ny afo, ireo fanaraha-maso sy fiambenana ny anatiny sy ivelany rehetra (caméras de surveillance) miaraka amin’ireo jirobe.
« Tamin’ny taona 1902 no naorina ny Fonjan’Antanimora raha tamin’ny 1980 kosa Tsiafahy. Efa mahatratra 300 % ny fihoaran’ny isan’ny voafonja eto Madagasikara. Efa tsy mifanaraka intsony amin’ny fanajana ny zon’olombelona. Koa rariny sy hitsiny raha manangana fonja vaovao isika, ary tsy eto Antananarivo irery fa amin’ny Faritra maro manerana ny Nosy » hoy ny Filoham-pirenena, Andriamatoa RAJOELINA Andry Nirina.
Ankoatra an’Imerintsiatosika, dia efa ho vita ihany koa ny Fonja ao Volamena Ambalakely Fianarantsoa. Tsy latsa-danja amin’izany ny fananganana fonja manara-penitra any Amboasary, Ambositra, Fenoarivo Atsinanana, Kelivondraka, Belo Tsiribihina, Sainte Marie sy ny maro hafa. Nanolotra fiara 2 hitaterana ireo voafonja ao Antanimora sy eny Tsiafahy ihany koa Andriamatoa Filoham-pirenena.